को हुन् कासिम सुलेमानी ? जसको ‘अवसान’ मा विश्व राजनीति तरंगित बन्यो - हिमाल दर्पण
को हुन् कासिम सुलेमानी ? जसको ‘अवसान’ मा विश्व राजनीति तरंगित बन्यो
इरानी सैन्य कमाण्डर एवं मध्यपूर्वकै युद्द र सुरक्षाका रणनीतिकार मानिएका कासिम सुलेमानीको हत्यापछि अहिले विश्व तरंगित छ । कतिले सुलेमानीको हत्याले तेस्रो विश्वयुद्दलाई संघारमा ल्याएकोसम्मको टिप्पणी गर्न थालेका छन् भने विश्वमा पुनः धु्रविकृतको राजनीति बढ्ने खतरा पनि उदाएको बताउन थालेका छन् ।
अमेरिकाले आफ्नो ठूलो शत्रु मानेको सुलेमानीको ‘सफाया’ त गर्यो तर यसपछि उत्पन्न तरंग र छालले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु उठाएको छ ।
सुलेमानीलाई यसरी मार्यो अमेरिकाले
नयाँ बर्ष २०२० को तेस्रो दिन अर्थात जनवरी ३ मा इराकको बगदाद विमानस्थल नजिक ड्रोन मार्फत एक हवाई आक्रमण गरेर अमेरिकाले अल कुद्र्स फोर्सका प्रमुख कासिम सुलेमानीको हत्या गरेको थियो ।
गुप्तचर सुत्रलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी अखबारहरुले उल्लेख गरे अनुसार सुलेमानीको हत्या सोझै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा भएको थियो । र, यस्का लागि अमेरिकाले चनाखो रहेर पूरै तयारी गरेको थियो ।
मृत्युको केही समय अघि मात्र सुलेमानी इराक पुगेका थिए । दुई सवारी साधनमा रहेका सुरक्षाकर्मीसंगै सवार भइरहेका सुलेमानीका साथमा इरान समर्थित इराकी सेना पनि रहेका थिए ।
ड्रोनबाट गरिएको थियो सुलेमानीमाथि आक्रमण
अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार सुलेमानीमाथि आक्रमण मानवरहित एयरक्राफ्ट एमक्यु ९ रिपरमार्फत गरिएको थियो ।
यो एक ड्रोन हो ,जो प्रतिघण्टा ४८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रफ्तारमा उड्न सक्छ । यही ड्रोनले बगदाद विमानस्थल नजिक गुडिरहेको २ सवारी साधनमा आक्रमण गर्दै २ मिसाइल प्रहार गरेको थियो । जुन मिसाइल विमानस्थलको कार्गो टर्मिनल नजिक झरेको थियो ।
अमेरिकी सेनाको व्यारेकबाट आक्रमण
आक्रमणको केही समयपछि इराकका बिभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको व्यारेकबाट समन्वय गरिएको थियो । घटना पछि शिया मिलिसियाहरुले शेयर गरेको भिडियोमा दुई कार जलिरहेको दृश्यहरु समेटिएको थियो ।
जस्मा सुलेमानी सवार थिए । त्यस्तै भिडियोमा सुलेमानीको रगतले लत्पतिएको हात देखाइएको थियो, जस्को एक औलामा उस्ले मन पराएको औठी पहिरिएका थिए ।
आक्रमणको धेरै समयसम्म आक्रमणबाट शिकार बनेका मानिसहरुको बारेमा कुनै आधिकारिक घोषणा गरिएन । अमेरिकी र अरबी सञ्चार माध्यमहरुले घटनामा ६ देखि ७ जना मानिस मारिएको आशंकाको समाचार मात्र छापिएका तथा प्रसारण गरिएका थिए ।
तर पछि इरानले घटनामा सुलेमानीको साथमा इराकी सैन्य कमाण्डर अबु महदी अल महांदिसको पनि मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । महांदिस इरान समर्थित मोबिलाइजेशन फोर्स अफ इराकका सहायक प्रमुख थिए ।
अल अरेबिया टेलिभिजन च्यानलले भने सुलेमानीका साथ मारिनेमा लेबनानका हिजबुल्लाह अधिकारी पनि थिए ।
सुुलेमानीसहित मारिने अन्यको हकमा भने संयुक्त राष्ट्रसंघका दूत एग्नेस कालमार्टले प्रश्न उठाउँदै ट्विट गरेका छन् ‘यो गैरकानूनी हत्या हो, यस्ले मानवीय कानूनको पनि उल्लंघन गरेको छ, कसैलाई ताकेर मार्नका लागि ड्रोनको प्रयोग गरिनु अवैध कार्य हो ।’
आक्रमण पछिको रहस्य
इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनाव पछि भएको यो घटनाले यी दुई देशको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ । पछिल्लो साता इराकको किरकुक शहरमा भएको आक्रमणमा एक अमेरिकी ठेकेदार मारिएका थिए भने ४ घाइते भएका थिए ।
यो घटनाका लागि अमेरिकाले इरान र सुलेमानीलाई जिम्मेवार ठह¥याएको थियो । यही घटनापछि इरान समर्थित इराकी सेनाहरुले बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा समेत घेराउ गरेका थिए ।
सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसंगको परमाणु सम्झौता अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । सम्झौता अन्त्यको घोषणासंगै इरानमाथि धेरै पक्षमा प्रतिबन्ध पनि लगाइएको थियो । जस्ले इरानको अर्थव्यवस्थामा भुइचालो नै गएको थियो ।
यसपछि इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा निरन्तर चिसोपन आउँदै गएको छ । गत बर्ष इरानले अमेरिकाको ड्रोन खसालेको दावी गरेपछि ट्रम्पले युद्दको नै तयारी गरेपनि पछि भने यो रोकिएको थियो । साउदी अरेबियाको तेल कम्पनी आराममा भएको आक्रमणको दोष पनि अमेरिकाले इरानलाई नै दिएको थियो ।
सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानी इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य अनुहार मात्र नभएर इरानका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरु मध्ये एक थिए । उनी आयोतोल्लाह खोमेनीपछिको दोस्रो व्यक्ति मानिएका थिए र खोमेनीसमक्ष सीधै रिपोर्टहरु पेश गर्थे ।
मध्यपूर्वमा इरानको सैन्य शक्ति कायम राख्न र रणनीति बनाउन मात्र नभइ युद्द र शान्तिका लागि पनि इरानका सच्चा चान्सलर थिए सुलेमानी ।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार सुलेमानी यस्ता पात्र थिए जस्लाई मार्न अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिहरु बराक ओबामा र जर्ज डब्ल्यु बुस पनि प्रयासरत थिए तर इरानसंगको सम्भावित युद्द उनीहरुले यो ‘आँट’ भने गरेनन ।
६२ बर्षका सुलेमानी सन् ८० को दशकमा इराकसंग भएको युद्दमा सक्रिय भूमिका निभाएपछि इरानी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । उनी इस्लामिक स्टेटसंगको युद्द र मध्यपूर्वमा दोस्रो प्रभावकारी नेटवर्क बनाउने मामिलाका रणनीतिकार मानिएका थिए ।
सुलेमानीको सल्लाह र सुझावमा नै सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदले विद्रोहीविरुद्धको लडाईमा रणनीति परिवर्तन गरेको बताइन्छ । इराकको सिया मिलिसियालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुलाई इरानको समर्थनमा उतार्ने एवं प्रशिक्षण दिने काम पनि यिनैले गरेका थिए ।
सुलेमानीको अवसान पछि अहिले मध्यपूर्वको मात्र नभइ पूरै विश्वको चैन हराएको छ । इरानले अब के गर्ने हो ? यही प्रश्नले धेरै विश्ववासीलाई बिझाएको छ । (बीबीसीबाट)